Baaskiil taayirrada dufanka korantada 750w laba matoor | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn Products baaskiil koronto duufaanta korantada ee korantada Baaskiilada taayirrada gawaarida baruurta korantada leh ee 750w dual motor A7AT26
Naqshad cusub laba mooto oo baaskiil taayir baruur koronto ah waxaa lagu qalabeeyay laba matoor oo awood leh 750w iyo batari lithium ah oo 60v ah, xitaa haddii ay tahay xagga sare, waddada ka baxsan, tacaburrada dibadda iyo socdaalka magaalooyinka, dhammaantood si fudud ayaa loo maareyn karaa. laba matoor, laba koontaroolayaal, 26*4.0 taayir baruur inch ah iyo laba hab oo fuulid, kuwaas oo dhammaantood keeni kara baaskiilka ugu fiican.
Taayirada ugu fiican ee dufanka leh laba baaskiil koronto 750 watt + 750 watt
Naqshad cusub baaskiil shidaalka korontada waxaa lagu qalabeeyay labo 750w oo matoor awood sare leh iyo batrool 60 lithium ah, xitaa haddii ay jiraan buuq, jid-gooyo, bannaanka bannaanka iyo socodka magaalada, dhammaantoodna si fudud ayaa loo maareeyn karaa. Laba matoor, laba ilaaliyaal, laba taayir oo 26-inji ah iyo laba nooc oo fuushan, kuwaas oo dhammaantood keeni kara e-bike ugu wanaagsan dhammaan dhinacyada si ay uga helaan waxyaabo fara badan oo fuushan oo ku saabsan nooc kasta oo dhul beereed ah, tusaale ahaan, xeebta ku teedsan badda, dariiqyada buur, jardiinooyinka qaranka iyo wadooyinka magaalada.
Labada baaskiil ee korontada ku shaqeeya A7AT26, 60V 750 watt + 750 watt motor, 26*4.0 inch taayir baruur, 60v 18ah batari awood leh
Muuqaal Sawireed Batroolka 60V Awoodda ballaadhan ee 60v 18ah naqshadeeyaha batroolka waxay kuu waafajineysaa baahiyo badan oo quwad leh. Hawlaha la qaadi karo ka dhig batarigu fududahay in la saari karo oo lagu dallaci karo. Kaliya 6-8 saacadood ayaa ku amraya waqtiga si aad u dhammaystirto buuxa iyadoo ay jirto xamuul dhan 71.4V 3A. 750w laba mooto Feejignaanta hore iyo gadaal 750W matoorrada aan cillad lahayn ayaa leh dabayl aad u sarreeya oo kuu oggolaanaya inaad si sahlan uga dul marto dhulal kaladuwan oo kaladuwan. Iyada oo leh matoor labaale ah, waxaad aadi kartaa meel kasta oo aad rabto, oo waxaad ku siin kartaa xawaare sare 50 illaa 55 km / saacadii. Midwalba wuxuu ka badan yahay waxtarka 80 boqolkiiba waxuuna ka hooseyaa 60 Db dhawaq. Kusoo qaado wax-ku-ool sareeya laakiin dhawaqa fuulida hoose. Iyo laba xakameeye moode kasta, sidaa daraadeed ku fuul jidka lugta ah, kaliya rog on matoorka gadaal ayaa dabooli kara baahidaada. 180mm biriiga biriiga ah Oo lagu qalabeeyay nidaamka birimikada muraayadaha '180mm Discke system', wuxuu siiyaa xoog xoog leh fariin durugsan buurta dusheeda ama soo bixitaanka. Hubso in baaskiillada baaskiilku korantada mar kasta iyo daqiiqad kasta. bandhigay LCD Muuqaale cajiib ah oo muuqaal shaashad weyn leh ayaa soo bandhigi kara macluumaad badan oo e-bike ah intaad fuushan tahay, tusaale ahaan, Fogaanta, Masaafada, Heerkulka, Awoodda bateriga, Awooda Tamarta iwm Waxay kale oo ay shaqo fiican ka qaban kartaa xaalada roobka iyadoo ay ugu wacan tahay biyuhu biyuhu. 26-inji oo dufan dufan ah 26 * 4.0 taayir oo dufan ah ayaa leh awood sii kordheysa, saameyn fiican oo xoog leh iyo qabashada sare. Wax kastoo dhulal ah, way fududahay in wax looga qabto, xitaa wadada buurta leh ee kacsan, jidadka magaalada, barafka, xeebta ama wasakhda. faahfaahinta Meegaarka: Aluminium Aluminium Daawaha Miisaanka Meelaha Gawaarida: 750w Hore iyo Gawaarida Gawaarida Gawaarida Batteriga: 60v 18ah batari laga qaadi karo lithium (H3-26F) Xawaaraha Heerka: 50km / h - 55km / h Max Range: 60km - 80km halkiikiiba Taayir: 26 * 4.0 inji oo taayir ah Load Max: 150-200kgs Wakhtiga lacag bixinta: Saacadaha 6-8 Qalabka: SHIMANO 7/21 xawaare PAS: Qalabka dareeraha caawiya ee heerarka badan Muuji: Daaqada LCD-ga Biriigu: 180mm nidaamka jejebiyey farsamo farsamo Qoryaanta: Thumb Throttle Heerka caawinta Pedal: Heerka 5 Iftiin hore: 3W iftiin hore oo iftiimin leh dekedda USB Laydhka dib-u-celinta: Nalalka loo yaqaan 'LED' iyo biligleynaya markii la joojinayo Saddir: Kursiga raaxada leh Xeedho: 71.4V 3A aqbasho 100-240V.
Haddii aad xiisaynayso baaskiil koronto oo sarreeya, booqo Baaskiil duug ah oo 1000w koronto ah, 2000w baruurkeenike.
Pls FARIIN NOOGA TAG
Tags:baaskiilada korantada ee dufanka leh ee ugu wanaagsan Baaskiilada taayirrada ee korantada leh laba mooto koronto
Ka hor: Goolasha korantada korontada ee korontada ku shaqeeya
Next: 26 Inch Xoog Fat Ebike 60V 2000W A7AT26